यस्तो देखियो ‘तिमीसँग’ को ‘टाइटल सङ्ग’ सार्वजनिक कार्यक्रम, कुन कलाकारले के भने ? (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentयस्तो देखियो ‘तिमीसँग’ को ‘टाइटल सङ्ग’ सार्वजनिक कार्यक्रम, कुन कलाकारले के भने ? (भिडियो)
बुधबार एक भव्य कार्यक्रमका बीच चलचित्र ‘तिमीसँग’ को शीर्ष गीत सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्रका निर्माण टिम तथा कलाकारको उपस्थितिमा यस चलचित्रको गीत रिलिजका साथै अडियो क्यासेट पनि सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा अभिनित कलाकार उद्धव भट्टराई, आकाश श्रेष्ठ र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, नाजिर हुसेन लगायत कलाकारको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा चलचित्रका कलाकार तथा निर्माण टिमले चलचित्रका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित नायिका दीपाश्री निरौलाले चलचित्रको सफल्ताको लागि शुभकामना व्यक्त गरेकी थिईन् । उनले निर्देशक निर्माता तथा कथाकार शिशिर खातीको निकै प्रशंसा गरेकी थिईन् ।
निकै प्रतिक्षित चलचित्र ‘तिमीसँग’ को शीर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ । नायक आकाश श्रेष्ठ र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह फिचरिङ गीतको लोकेशन, मेकिङ तथा प्रस्तुति निकै उत्कृष्ट छ । शुशील क्षेत्रीको छायांकन रहेको गीतमा अन्नपूर्ण बेशक्याम्पको सौन्दर्यलाई निकै रचनात्मक तरिकाले क्यामेरामा कैद गरिएको छ । कोरियोग्राफीमा शिशिर खातीको मिहिनेत निकै उत्कृष्ट रहेको छ जसको कारण आकाश र साम्राज्ञीको जोडी आकर्षक देखिएको छ । राहुल मुखर्जीले संगीत तथा लेखु सहयात्रीको शब्द रहेको गीतमा मधुरा भट्टचार्य र राहुल मुखर्जीको आबाज रहेको छ ।
यसअघि सार्वजनिक भएको चलचित्रको ट्रेलर ६ लाख बढी दर्शकले युट्युबमा हेरिसकेकाले सार्वजनिक यो गीत पनि हिट हुने निर्माण युनिटको विश्वास रहेको छ । चैत २३ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरिएको ‘तिमीसँग’ मा आकाश र साम्राज्ञीको अलवा नाजिर हुसेन, सुनिल वि।क, शिशिर राणा, अनुपम श्रेष्ठलगायतका कलाकारहरुको मुख्य अभिनय रहेको छ । फिल्मका लेखक, निर्माता र निर्देशक सबै बिधामा शिशिर राणा रहेका छन् । चलचित्रमा रोशन भट्टराईको एक्सन, कविराज गहतराज र रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी छ ।
पटकथामा शिशिर राणा, साकार ओझा, समुन्द्र उप्रेती र सुशिल क्षेत्रीको भूमिका रहेको छ । विदेशबाट घुम्न आएकी एक युवतीसँग दुई पुरुष पात्रको रमाइलो जर्नीको कथा चलचित्रमा देख्न सकिन्छ ।